Ruushka, Shiinaha iyo Iran: Yay la Doonayaan Inuu Ku Guuleysto Doorashada Mareykanka | Gaaroodi News
Ruushka, Shiinaha iyo Iran: Yay la Doonayaan Inuu Ku Guuleysto Doorashada Mareykanka
Bishii la soo dhaafay sanatar ka tirsan xisbiga Republican-ka ayaa taageeray fikradda ah in Ruushka uu doonayay inuu doorashada Trump ku guuleysto. Madaxweyne Putin iyo Trump
Xeer ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa sheegay in Shiinaha uu door bidayo in aanan Trump dib loo soo dooran. Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping
Kooxda Iran ee loo yaqaan Phosphorus ayaa la sheegay iney ku guul dareysteen iney gudaha u galaan cinwaanada saraakiisha Aqalka Cad iyo shaqaalaha doorashada u qaabilsan Trump. Isku daygaan ayaa la sheegay iney sameeyeen intii u dhaxeeysay bishii May iyo June ee sannadkan. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani